- आज धान दिवस र दही चिउरा खाने दिन
आज धान दिवस र दही चिउरा खाने दिन
काठमाडौंः आज असार १५, नेपाली कृषकहरुको महत्वको दिन । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइँने धान दिवस आज खेतमा काम गरी दही च्यूरा खाएर मनाइँदैछ ।
कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका बीच पनि कृषकहरु यो दिवसलाई मनाइँरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि यस दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम राखेका छन् । राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल उदयपुर पुगेका छन् । त्रियुगा नगरपालिकाले वडा नं. १३ बहेडवा भन्ने स्थानमा सामूहिक रुपमा धान रोपेर धान दिवस मनाइने छ । कृषि विभागले कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटार परिसरमा सामाजिक र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै रोपाइँ महोत्वसव गर्दैछ ।
कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सिफारिसमा वि.सं. २०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।
नेपालमा असार १५ का दिन हिलो टेक्नु पर्ने मान्यता छ ।
यस दिन रोपाइलाई पर्वको रुपमा मनाइने हुँदा खेतको हिलोमा पसेर असारे गीत गाउँदै धान रोप्ने गरिन्छ । हल गोरुले हिल्याएको हिलोमा धान रोपेर आपसमा रमाउँदै एकआपसमा हिलो छ्याप्ने प्रचलन पनि छन् ।
रोपाइ गरेर थाकेपछि पोषिलो र शीतलता प्रदान गर्ने खाद्य परिकार दही, चिउरा र अचारको खाजा खाने गरिन्छ । त्यसैले असार १५ लाई दही चिउरा खानेदिनको रुपमा पनि लिने गरिएको हो । खेतीपातीबाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही चिउरा खाई असार १५ मनाउँछन् ।
प्रकाशित मितिः सोमबार, असार १५, २०७७, ११:१६